Ezokungcebeleka esisogwini olusentshonalanga Black Sea, bebelokhu ethandwa njalo. Lezi zihlanganisa Isi-Abkhazian futhi emadolobheni amaningi, okuyinto, ngokuba ngokulinganiswa ayemncane, ezinsukwini zethu zaqala ukuthola udumo phakathi baseRussia njengoba best izivakashi izindawo esifundeni. Phakathi kwabo - emzini Gagra, okungenye yezindawo ezinhle kakhulu Abkhazia.
Indawo enkulu ukuze uphumule
Lokhu resort wezempilo abadumile is lisegqumeni. Azungeze eziningi relict izihlahla, okuyinto abadumile Seaside Park. I amakamelo zokungcebeleka eziningi ka Gagra inikeza imibono ezinhle kakhulu kokubili izintaba ezivulekile yoLwandle Olumnyama. Gagra resort kubhekwa iyipharadesi kubathandi lolwandle, kuhambisana ezokuvakasha.
Kwasala lenqwaba izikhumbuzo zomlando eyaqala kwezinkathi ezahlukene. Phakathi kwabo Abaata zokugeza idolobha inqaba, okuyinto yasungulwa ekuqaleni kwekhulu leminyaka eledlule, inqaba omangalisayo okungewakho iSikhulu Oldenburg nabanye abaningi. Budebuduze edolobheni futhi itholakala impophoma Gegsky. Lapha kulapho abanye movie okudalwe ngokudubula izigcawu Sherlock Holmes uDkt Watson. Izivakashi uyoba nesithakazelo ukuvakashela Bzybsky inqaba, vakashela amachibi eziningi futhi ezindaweni zokungcebeleka, okuyinto zizungezwe eziningi Gagra.
The yokungcebeleka is evuthiwe ingqalasizinda ehhotela. Phakathi ethandwa phakathi baseRussia zokungcebeleka kanye izakhiwo izivakashi uqokomisa "Colchis" - guest house, etholakala kule ndawo edumile komuzi, ecebile izingosi zomlando kanye izikhumbuzo - e Old Gagra. indawo Its ngokoqobo aminzisa ezindaweni eziluhlaza Seaside Park. Wawusemhlabathini nezihlahla eziningi exotic of relict izihlahla.
"Colchis" - guest house, kakhulu labo abakhetha ongakhetha eziphansi zokulala iholidi in Abkhazia. Isebenza unyaka wonke. umzimba wayo uyabaselwa, ngakho abantu abaningi beze lapha nje ngoba ehlobo kodwa ngamaholide ebusika.
"Colchis" - guest house, tour opharetha isebangeni njengomkhaya. Njengoba lizungezwe izwe epaki mlando kanye emaceleni ale ntaba, kuyinto ephelele izingane, okuyinto kakhulu wusizo isimo sezulu sendawo nenhlabathi emoyeni emangalisayo, exovwe ngephunga zikagamthilini, umsayipuresi, yebo, kolwandle. Esikhungweni impilo has yokupaka ayo evikelekile. insimu yalo has a ukubukwa platform nokuqaphelisisa umbhoshongo. "Colchis" - guest house, elakhiwa ngo-kwamaSoviet. Nokho, kusukela ngaleso sikhathi-ke isishintshe kakhulu. Kwakukhona bafeza yokulungiswa dolobha nge esikhundleni amapayipi ngezinye izikhathi.
Pension "Kolkhida" (Abkhazia) itholakala amakhilomitha amabili nambili kusukela maphakathi Adler, endaweni yokungcebeleka Gagry. Eduze yokudlela edumile esifundeni "Gagripsh". Isiteshi sesitimela ukude nge eziyisishiyagalombili, sezindiza - mayelana nanhlanu amakhilomitha.
I eziyinkimbinkimbi, esakhiwa endlini eqashisayo eyayiqhele "Colchis" (Gagra) - ingenye isakhiwo ayisishiyagalolunye storey, okuyinto izindlu kanye nokuphatha, ayisishiyagalolunye nane amakamelo izigaba ezilandelayo: Deluxe futhi ejwayelekile. zommbila ababili yesimanje ukuthatha izivakashi ngokushesha ezingeni oyifunayo. Zonke amakamelo ahlotshiswe iyashintsha iyaphupha ibe imibala. Ayakhululwa eliphezulu nefenisha nezinto zikagesi. It has a emphemeni, lapho kukhona ifenisha plastic phambi kwezinye. amawindi okuvula zitholakala noma ulwandle noma ohlangothini amahle aseningizimu kwepaki ozungezayo emzimbeni.
Amakamelo Standard, eyenzelwe abantu eyodwa, ababili noma abathathu, ingaphakathi lihlotshiswe ngemibala esithambile. Area amakamelo - kusukela eyishumi nesithupha ngamamitha amabili nane. Amakamelo isici imibhede ayiwele naye, eliseceleni kombhede amatafula, isibuko enze-up, Ottoman, ithelevishini. Lihambisana yokugezela nge ubhavu.
lokulala Suites Single futhi double zenzelwe shades beige kanye peach. Amakamelo ethokomele ahlotshiswe in isitayela yesimanje kanye enazo. Zonke lezi amakamelo kuvulandi. I Suites kuqukathe egumbini lokuphumula nasekamelweni, ahlukanisa yiminyango. Sinenkosi imibhede double, iqoqo ifenisha upholstered, isiqandisi, i-TV, bese wonke lamakhono abalulekile ukuze ukhululekile ephilayo ifenisha.
inkonzo Ntombazane, kungakhathaliseki ukuthi isigaba, nsuku zonke. Guqula zelineni Kwenziwa zonke izinsuku ezine.
ezokungcebeleka yakhe Pension "Colchis" (Gagra) inikeza ukudla ezintathu esigcwele yokudlela eyinhloko uhlobo "lezitsha". Ngaphezu kwalokho, endaweni kulesi sibhedlela esebenza ibha lesimanje Ingaphakathi stylish. Lapha ebusika ungalalela kwezintathawe eziphansi kwekhanzi izinkuni eziko, induduzo emasofeni ethokomele ukuze ingilazi itiye hot. Ehlobo, ihhotela linikeza uhla enkulu iziphuzo ezibandayo, kanye nama-dessert kanye Ungadla ukuba ivumelane yonke akuthandayo.
ukudla amathathu ngosuku welithi "imenyu setha" is emananini. Amathebula asizwa elikhulu elikhanyayo Igumbi zokungcebeleka. Izivakashi uphiwa Ukukhetha enkulu izitsha of cuisine Russian futhi zaseCaucasia, kanye amaningi izithelo, imifino kanye nama-dessert.
Pension "Colchis" (Abkhazia, Gagra) lizungezwe park olunothile, okuyinto Cascade ogwini. On endaweni landscaped amalungiselelo amaningi imbali zayo nezinto landscape design. Ukuze yesihlabathi itshana amabhishi kungenziwa esafinyelelwa udladla bese udabule ukudlula ngaphansi. ukugeza zone amamitha kusuka umzimba omkhulu namashumi ayisihlanu ezimbili kuphela. Inama ngokugcwele Izinsiza yesimanje: yonke indawo nge ilanga loungers kanye emphemeni izihlalo, inala izambulela ukuvikela kusuka ukushisa kwehlobo.
Beach embozwe isihlabathi futhi amatshe amancane, kuyoba njalo nokuba khona isichathule esikhethekile ukugeza, ikakhulukazi izingane, is ezifudumele. Ngena ngemvume ulwandle engajulile. Isizini ukubhukuda iqala Gagra kusukela maphakathi no-May futhi ihlala kuze kube sekupheleni kuka-October. Lapha isimo sezulu esifudumele nakwezifudumele nge izinsuku eziningi libalele. Ngesikhathi sebehlezi ogwini usebenza cafe ongaphandle, kukhona imishini ezemidlalo sokuqasha futhi ongaphandle umdanso phansi.
Labo ephumule "Colchis", omunye izinzuzo main of impesheni ukuthola imvelo enhle kakhulu indawo zokungcebeleka. Amakamelo zihlanzekile futhi elikhanyayo. Ikakhulukazi eziningi okuvelayo izinhlobo ezinhle kunazo amafasitela. Pension "Colchis", sibuyekezwe ukudla, lapho omuhle kuphela ebhishi nje zemizuzu emihlanu uhambo. Abaningi bakholelwa is a plus elikhulu, njengoba eya elwandle muhle.
Izivakashi kusezingeni umxhwele izinkambo. Iningi lazo bakholelwa ukuthi iholide waba yimpumelelo. I ethile kuphela egibela abanye abakubiza ngokuthi uhlelo amanzi ashisayo.